Phyu Phyu Thin Sympathizer: 03/01/2008 - 04/01/2008
PPT on Wikipedia
1 comments at 3:13 AM Labels: Home Affairs
Phyu Phyu Thin (b. 1972) isaBurmese HIV/AIDS activist and supporter of the National League for Democracy. On May 21, 2007, Phyu Phyu Thin was arrested by police in Yangon for organizingaprayer rally to call for the release of detained National League for Democracy leader Aung San Suu Kyi. Never told what crime she had committed, she was held for more thanamonth, and was released on July 2, 2007.
As an activist, Phyu Phyu Thin has been an outspoken critic of the State Peace and Development Council, which she says is understating the number of HIV and AIDS cases in Myanmar. She operatesaclinic in Yangon that provides treatment, medicine and counseling to HIV and AIDS patients.
On June 5, 11 AIDS patients, who were participating in prayer rallies, calling for the release of Phyu Phyu Thin, were detained at Waybargi Infectious Diseases Hospital. They were later released on June 8. The United States Department of State also called for Phyu Phyu Thin's release.
While in detention, Phyu Phyu Thin stagedahunger strike, taking only liquids for about one week. Her family, which had not been told where she was being held, said it would fileamissing person's case with police.
Phyu Phyu Thin has previously been detained in 2000, after she and other Suu Kyi supporters were bundled away by police fromarally for Suu Kyi. She was held foratime in Insein prison.
Wikinews has news related to: Eleven HIV/AIDS patient-protestors detained in Myanmar International Red Cross condemns Myanmar regime Detained AIDS activist Phyu Phyu Thin released in Myanmar ^ab c Associated Press (2009-07-03). Prominent Myanmar AIDS activist freed from detention. The Star (Malaysia). Retrieved on 2007-07-03. ^ab Burma Released HIV-Positive Activists From Hospital Confinement. Voice of America (2007-06-08). Retrieved on 2007-06-29. ^ab Mann, Naomi (2009-07-03). A Brave, Caring Woman Now Also Needs Help. The Irrawaddy. Retrieved on 2007-07-03. ^ Lae, Aye (2009-06-07). HIV/AIDS Patients Detained in Rangoon. The Irrawaddy. Retrieved on 2007-06-29. ^ Aung, Htet (2009-06-28). “Free Suu Kyi” Campaigners Released. The Irrawaddy. Retrieved on 2007-06-29. ^ Paung, Shah (2009-06-21). Relatives of Missing HIV Activist Threaten to Sue Authorities. The Irrawaddy. Retrieved on 2007-06-29.
2008 Homo Homini award goes to3Burmese women
0 comments at 3:31 AM Labels: General news
ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းသူ မြန်မာအမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေးဆုရ
ကိုသက် irrawaddy မတ် ၅၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူများဖြစ်ကြသည့် မစုစုနွေး၊ မဖြူဖြူသင်းနှင့် မနီလာသိန်းတို့ ၃ ဦးကို Czech နိုင်ငံ အခြေစိုက် People in Need အဖွဲ့က ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် Homo Homini ဆုကို ယနေ့ချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆုသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်သူများ၊ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများတွင် အကြမ်းမဖက်သည့်နည်းဖြင့် တစိုက်မတ်မတ် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြသူများကို ချီးမြှင့်သည့်ဆုဖြစ်ပြီး People in need အဖွဲ့က Czech နိုင်ငံPrague မြို့တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲတွင် ချီးမြှင့်သည်။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကို Czech နိုင်ငံစံတော်ချိန် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်ပြုလုပ်ပြီး ဆုကို မစုစုနွေး၊ မဖြူဖြူသင်းနှင့် မနီလာသိန်းတို့ကိုယ်စား ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) အဖွဲ့ဝင် မလဲ့လဲ့နွယ်က လက်ခံရယူမည် ဖြစ်သည်။
မစုစုနွေး၊ မဖြူဖြူသင်းနှင့် မနီလာသိန်းတို့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်း ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်သည့် ကုန်ဈေးနှုန်းနှင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများကို ဦးဆောင်သူများဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ၏လိုက်လံဖမ်းဆီး မှုကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေကြရင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ရှောင်တိမ်းနေစဉ် မစုစုနွေးသည် လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် စစ်အစိုးရစိုက်ထူထားသည့် အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်တွင် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးစာတန်းကို ကပ်သောကြောင့် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
မဖြူဖြူသင်းနှင့် မနီလာသိန်းတို့မှာ ယနေ့အချိန်အထိ တိန်းရှောင်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင် မနီလာသိန်းက “အခုလိုဆုရတဲ့အချိန်မှာ ကျမပထမဆုံး ပြေးမြင်မိတာကတော့ ထောင်ထဲ မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေ၊ ထောင်ထဲနဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဟန်း ပြည်သူ ကျောင်းသားလူငယ်အားလုံးကို ပြန်လည် သတိရပြီးတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ နောက်တခုက ကျမတို့နိုင်ငံ့အရေးစွမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို တခြားနိုင်ငံက ထပ်တူခံစားပြီး ဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက် ကျမ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မနီလာသိန်းသည့် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ ရပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်သည်။
မစုစုနွေးနှင့် မဖြူဖြူသင်းတို့သည် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး မဖြူဖြူသင်းသည် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ၏ ကိုယ်ခံ အားကျဆင်းမှုရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူလည်း ဖြစ်သည်။
အေအေပီပီ အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က “ဒီအမျိုးသမီး ၃ ဦးဟာ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တို့အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်နေသူတွေ ဖြစ်တယ်။ သြဂုတ်လနဲ့ စက်တင်ဘာလ အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လောင်စာဆီဈေးကျဆင်းရေးဆန္ဒပြရာမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး သံဃာတော်တွေ ကံဆောင်ရာမှာလည်း တက်ကြွစွာ ထောက်ခံကူညီခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာဒီဆုကို တကယ့်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
“အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာတက်ကြွစွာ ပါဝင်နေတာကို ပြသလိုက်တာပါ။ ဒီအတွက် ဆုချီးမြှင့်တဲ့ အဖွဲ့ကိုလည်း အထူး ကျေးဇူးတင်ထိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း အတုယူစရာ ပြယုဂ်တခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်း ဦးတိတ်နိုင်က ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် စစ်အစိုးရ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံနေရသည့် အမျိုးသမီး ၁၅၀ ကျော် ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သီလရှင် ၁၀ ပါးခန့် ပါဝင်သည်။
People in Need အဖွဲ့က ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Homo Homini ဆုကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) တို့ကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ဖူးသည်။